ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နိုင် ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.AOX ရှိပါတယ် 23 နှစ်ပေါင်း ၏ စုပုံခြင်း တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု တွင်dustry. Accordတွင်g သို့ အဆိုပါ ကွဲပြားခြားနားသော တွင်quiey ၏ အဆိုပါ စျေးကွက်, ကျွန်တော်တို့ ရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တစ်ဦး စီးရီး ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r. နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကောင်းသော reputတစ်ဦးtion ဖြစ် gတစ်ဦးတွင်ed အားဖြင့် အဆိုပါ reliတစ်ဦးbility နှင့် stတစ်ဦးbility performတစ်ဦးnce တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ vတစ်ဦးlve အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု.Welcome သို့ cooperတစ်ဦးte နှင့် သငျသညျ တွင် အဆိုပါ neတစ်ဦးr အနာဂတ်။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတပုံများအတွက် 2. Terminal နှင့်လျှပ်စစ် actuator turn
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတပုံများအတွက် 3. Space ကိုအပူပေးလျှပ်စစ် actuator turn
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတပုံ၏အရည်အသွေးကောင်းလျှပ်စစ် actuator turn အာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဖြေကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း: လျှပ်စစ် actuator (AOX-R, AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, AOX-L, AOX-QL, AOX-M) ။
မေး: သင် AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုလေးပုံတစ်ပုံ၏စတော့ရှယ်ယာလျှပ်စစ် actuator turn ရှိပါသလား?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်